Doorashada Puntland ee 2019ka Waa Mid Mugdi Ku Jirta. | SAHAN ONLINE
Doorashada Puntland ee 2019ka Waa Mid Mugdi Ku Jirta.
Doorashada Puntland waxay ahaan jirtay midku timaada qaab saami qaybsi oo qabaa’ilku wakiilo soo xushaan dabadeedna loogu yeero gollaha wakiiladda Puntland.
Waxaa mar welba dadweynuhu u baahi qabay in laga gudbo habka xulashada beelaha, oo loo gubdo doorasho Hal qof iyo hal cod oo ku timaada rabitaanka shacabka oo xor ah, inkasta oo aan i fafaaleheedi iyo hadal haynteeda doc la iska dhigay oo aad moodo in laga maarmay.
Madaxweyne C/weli Cali Gaas khudbadihiisii ugu horreeyey 2014kii oo ahayd markii xukunka Puntland la wareegey wuxuu marar badan ku celceliyay ogaada C/weli waa fashilmay haddii uu Puntland gaarsiin waayo (one man one vote) oo ah qof iyo codkiisa, Labo sanno iyo bar ka dibna wuxuu magacaabay guddo doorasho oo aanay ka muuqan wax howl qabad ah, waana sababta keentay in guddoomiye Axmed Kismaayo is casilo dabeedna laba waayo hadal heyntood dembe.
Dhanka kale waxaa soo badanaya buuqyo iyo walaahow siyaasadeed, amni xumo, kalsooni darro dowladda laga qabo, xubnaha golaha xukuumadda oo aan door facaal ah ku lahayn dadka ay matalayaan. Xog-isdhaafsiga xukuummada iyo shacabka oo kala maqan, waxaa kaloo jirta in dadku ayba dhibaato kala kulmeen doorashadii barlamaanka federaalka oo 51 qof keliyi dooranaysay oo laysku nacay laguna kala fogaaday, iyadoo laaluushkuna u noqday mid taxane ah oo ilaa odoyaasha beesha, kan la dooranayo iyo kan wax dooranayaba la wada xalaashaday.
Waxaa muuqatay inay dhib iyo laaluushba yarayd habka soo xulidda beelaha ee hore PL ugu dhaqmi jirtey iskuna dooran jirtey.
Haddii la yiraahdo doorashada xisbiyada badan ayaa ka dhacaysa PL, waxaa loo baahan yahay in qodobo dhowr ah meel la isla dhigo sida:-
Doorashada ma waxaa lagu salaynayaa goboladii iyo degmooyinkii aqoonsiga dowladnimo lahaa 1990, mise kuwa qabqableyaashi hab beeleedka ku magacaabeen.
Haddii kuwa burburka la qaabto ya awood u leh oo kala xadaynaya.
Tirokoob awood dhaqaale iyo mid fulineed ma loo leeyahay, is-aaminaadda tira koobka suurtagal ma yahay?
Haysashada hubka oo carqalad amni ah, mana muuqati cid hub ka dhigis awood u leh.
Degmooyinka Puntland oo qayb badan oo ka mid ahi aanay gacanta ku jirin doorashana laga qaban karin.
Dhaqaale oo aan loo heli karin marka loo eego heer PL. Sidaas darteed sababaha kor ku xusan iyo qaar kale oo jiri kara ama iman kara ma muuqato in doorashada Asxaabta badani ay ka suurta geli karto PL 2019.
Gunaanadkii, Haddaba Madaxweyne C/weli Cali Gaas waxaa laoga fadhiyaa intaan xeero iyo fandhaal kala dhicin oo waqtiga la haysto inuu caddeeyo habka doorashada Puntland ee 2019 sida loo qabanayo oo soo tuuro codkiisa, una caddeeyo dadweynaha inay sidoodi hore u soo xushaan gollaha Wakiiladda Puntland ( Geesinimo & hadal cad Muuji C/weli).
C/raxmaan Maxamed Yuusuf
“Maqaalkani wuxuu ka turjumayaa aragtida Qoraaga loomana fasiran karo mida Sahanonline, Waxaanu soo dhawaynaynaa dhammaan maqaaladda ummada iyo dalka u Faa’iidaynaya”
Eng. Yariisow oo martiqaad u sameeyay safiirka Turkiga ee Soomaaliya[Sawirro]
Dad ku dhintay dibadbax ka dhacay magaalada Baydhabo
Agaasimayaasha Maamulka Puntland oo la barayo Habka Maareynta Maaliyadda[Sawirro]
Xoghayaha Guud ee Baarlamaanka oo sheegay inuu jabay Mooshinka Madaxweyne Farmaajo[Akhriso]
Madaxweyne Kuxigeenka Puntland oo ka laabtay dacwadii uu u gudbiyay Maxkamadda sare[Akhriso]
Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka oo Kormeeray Saldhigga Ciidanka Danab